Ila Tali: Waxaan soo raacay Ciyaal Ziyo, Ma shaqeyste ah ee maxaa talo ah . - iftineducation.com
Ila Tali: Waxaan soo raacay Ciyaal Ziyo, Ma shaqeyste ah ee maxaa talo ah .
iftineducation.com – Waxaa todobaadkan dhambaal noo soo diray gabar dhalinyaro ah sida ay sheegtay oo hadda uu qabo wiil dhalinyaro ah oo aan shaqeysan, labadoodu waxay la nool yihiin reerka wiilka,
waxay sheegtay inay dhibaato ku qabto nolosha ay ku sugan tahay iyo gaar ahaan reerka wiilka qaba, waxay sheegtay inay rabto inay furriin ka dalbato mar haddii uusan waxba ka ahayn gurigooda oo uusan awoodin inuu meel gaar ah dejiyo.
Salaan qaali ah kadib Walaasheen, qoraalkaada intii aan ka fahamnay Talo celinteeda ayaan kuu soo gudbineynaa Insha’Allaah, waxayna ku billaabaneysaa sidan:
Horta qoraalkaada waxaa ka muuqda inay jiraan waxyaabo badan oo aad diiddan tahay iyo arrimo aad dooneyso inaad ku dhaqaaqdo.
Aqriso : Qaababka la iskugu diyaariyo galmada
Qoraalkaada waxaa ka mid ah inaad dhibaato u aragto shaqo la’aanta uu ninkaadu ku sugan yahay, inkastoo aadan noo sheegin inuu isagu mas’uul ka yahay inuu shaqo la’aan noqdo iyo in waqtiga iyo waayuhu ay keenneen oo dhulka oo dhan aysan shaqoba ka jirin, haddii ay tahay mid isaga u gaar ah, waxaad ku dhiirigelisaa muhiimadda ay shaqada u leedahay qoyskiina, waa hubaal inuu hadalkaada si wanaagsan ugu baraarugi doono oo uu aqbali doono.
Waxaa kale oo aad sheegtay inaad inay jiraan waxyaabo aad ka tabaneyso reerka wiilka ku qaba, taasi waa wax dhaca laakiin waxaa waajib kugu ah inaad dulqaad sameyso waayo reerka qudhooda ayaa waxaa ku jiri kara dad dabeecad ahaan kaa duwanaan kara ama ku dhaliili kara adiga dhaqan ahaan, marka marwalba waa inaad samir iyo dulqaad la timaado.
Dhanka kale waxaad sheegtay inaad ka dooneyso ninkaada inuu meel gaar ah ku dejiyo, taas ma kugu raaci karno waayo nin aan shaqo heysan sidee buu meel gaar ah kuu dejin karaa? Sow kirada guriga cusub iyo biilka reerka isaga lagama rabo, sow taas micnaheedu maahan murjin iyo walaac hor leh iyo adigoo dhibaatadii jirtay shidaal ku sii shubaya, waxaan kugula talineynaa in adiga laftaada xil weyn kaa saaran yahay reerka oo qudhaadu aad shaqo raadiso inta aad heysataan fursadda inaad la noolaataan reerka wiilka.
Marnaba ku guma raaci karno inaad furriin weydiisato qof duruuf adag ku jira islamarkaasina adiga ku jecel, Jooji! ayaan kaa codsaneynaa, waxaa kale oo muhiim ah inaad u tagto dhaqtar oo aad hubiso bal inay jirto siyaado uur ah ama dhiiga caadada uurka uu kaa joogsaday, markaas waxaa isbeddel ku imaanayaa dabeecaddaada oo dhan oo walac ayaad noqotay, marka meelo badan wax ka fiiri adigoo raali ah, go’aan degdeg ah nolol dhisan laguma burburiyo.
Ma og tahay in qoysaska nolosha ku liibaanay oo dhan aysan nolosha ka soo billaabin cirka iyo caadka balse ay ka soo bilaabeen dhulka iyo xaalado ad adag ha yeeshee ay dulqaad iyo samir uga soo gudbeen.
Waxaan rajeyneynaa nolol farxad leh iyo inaad dulqaad la timaado.